musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Vazhinji vashanyi veHawaii vakabaiwa jekiseni rakanangana neCOBV-19
Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • HITA • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Kamaainas • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
IHawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa zvakabuda pakutsvaga kwayo kwekupedzisira, uko kwakaongorora vashanyi kubva kumatunhu eU.S.vakashanyira Hawaii kubva Chivabvu 15 kusvika Chivabvu 24, 2021, kuyera ruzivo rwavo nehurongwa hweHawaii Hwakachengeteka uye rwendo rwese kugutsikana.
Uku ndiko kuongorora kwechitatu kwevashanyi mune zvakateedzana zvakatanga kupera kwegore rapfuura.
Vanenge vese (89 muzana) yevashanyi vakaferefetwa muchidzidzo chazvino ichi vakati vakabaiwa jekiseni zvizere.
Dzokorora vashanyi vaiwanzowana jekiseni rakazara pamwe nevadzidzi vekoreji uye avo vane mari yemhuri inodarika $ 100,000.
Vazhinji vevashanyi (76 muzana) vakaratidza rwendo rwavo se "Kwakanaka," zvichidzika zvishoma kubva munaKurume (82 muzana) uye Zvita / Ndira (85 muzana). Nyaya hombe (makumi matatu kubva muzana) yakataurwa nevanopindurwa yaive yezve kushomeka kugona kana kuwanikwa kwemaresitorendi uye zvinokwezva.
Nepo zvirango zvemunharaunda COVID-19 zvakaramba zviripo mukati merwendo rwavo, 82 muzana yevashanyi vakaratidza kuti vaikwanisa kuita zvese kana zvizhinji zvezviitiko zvavainge varonga.
Ongororo ichangoburwa yakaratidzawo kuti vashanyi vane mari yemhuri iri pasi pe $ 100,000 vakagutsikana nerwendo rwavo kupfuura avo vane mari yemhuri inodarika $ 100,000. Pamusoro pezvo, avo vakashanyira chitsuwa chimwe chete vakagutsikana kupfuura avo vakashanyira zviwi zvakawanda.
Pavakabvunzwa nezve ruzivo rwavo, 93 muzana yevakabvunzwa vakaratidza hushamwari hwevashandi nevagari se "Vakanaka" kana "Pamusoro peAvhareji." Vazhinji vashanyi vakayera yavo hotera (kana nzvimbo yekugara) seyakanakisa.
Mukati maMay 2021, Hawaii's Kufamba Kwakachengeteka chirongwa chakatendera vazhinji vafambi vanosvika vachibva kunze kwenyika uye vanofamba pakati-mudunhu kuti vapfuure zvinotenderwa kwemazuva gumi kuzvisarudzira neyakavimbika mhedzisiro COVID-10 NAAT bvunzo kubva ku Kuvimbwa Kwayedza Partner.
Nezve Kufamba Kwakachengeteka, huwandu hwakaramba hwakaenzana mukati meongororo nhatu, pamwe nevashanyi vese (98 muzana) vachiziva nezvemaitiro eHawaii ekutanga-kufamba kwekuyedza vasati vabva kumusha kwavo. Iyo muzana yevashanyi avo vakati vaive nematambudziko ekuuya-kusara akasarawo asina kuchinja; zvisinei, vanhu vazhinji vaitaridza kuve nezvinetso newebhusaiti yeHawaii Safe Safes (29 muzana munaJune vs. 17 muzana munaKurume vs. 9 muzana muna Zvita / Jan).
Vanopfuura hafu (56 muzana) yevakabvunzwa vakati vachashanyira kuHawaii zvakare zvisinei nezvinotarisirwa kushanya zvisati zvaitika, 23 muzana vakati vachashanyazve kana denda rapera, 11 muzana vakati vachashanyira kana pasina pekuisa kwoga kana kuyedzwa kunodiwa , uye gumi muzana vakati havana hurongwa hwekudzokera kuHawaii.
HTA's Tourism Research Division yakaita chibvumirano cheAnthology Research kuitisa ongororo yepamhepo pakati paJune 2 naJune 8, 2021, sechikamu chechibvumirano cheVashanyi Kugutsikana uye Chiitiko Chekuita. Mhedzisiro yeChikumi 2021 Yevashanyi COVID-19 Yekudzidza yakaunzwa panguva yeHTA's Board of Directors musangano muna Chikumi 24.